Qubanaha » Madaxweyne Farmajo ay soo wajaheeyso labo Caqabadood oo ku aadan Xulida Ra”iisulwasaraha.+Akhriso
Madaxweyne Farmajo ay soo wajaheeyso labo Caqabadood oo ku aadan Xulida Ra”iisulwasaraha.+Akhriso
Madaxweynaha cusub ee Soomaliya Maxamed Cabulaahi Farmaajo oo hada hoy u ah Hotelka Al-jazeera ee Magalada Muqdisho ,ayaa waxaa laga cabsi qabaa in ay caqabado soo wajaahaan ku waasi oo ku aadan qaabka uu u soo xulanayo Ra”iisulwasaraha Dalka .
Caqabadda 1aad ayaa waxaa ay ka heysataa Madaxweynaha Xisbiga dal jir ee is ku heysta in iyaga ay Madaxweynaha Soo saareen oo ay howl badan la qabteen ,iyo koox uu wato Fahad Yaasiin oo mudda dheer la shaqeynaayey Madaxweyne Farmaajo oo ah iyana caqabadda 2aad.
Xisbiga dal jir ayaa waxaa ay doonayaan in Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo uu Ra”iisulwasare ka dhigo Qof ay igayaga wataan sida la sheegay heshiis u arinkaasi kula galay madaxweynaha kooxdaasi, oo xitaa la sheegay in la is ku dhaarsaday.
Siidokale Fahad yasiin oo la ogyahay in Kooxda Damo jadiid uu ugu baxay farmaajo dartiis kadib markii uu u soo jeediyey in Madaxweynaha aan hada xilka wareejinin Xasan Shiikh uu ka dhigo Ra”iisulwasare farmaajo lagana diiday ,ayaa isna waxaa la sheegayaa in Madaxweynaha ay ku balameen in Ra”iisulwasare laga dhigo qof isaga uu wato.
Madaxweyne Farmaajo oo labadaasi balanqaad sameyey, ayaa waxaa heysata laba daran mid dooro, waxaana uu hada ku jiraa labadaas dhinac midkood in uu ku qanciyo xilka Ra”iisulwasaraha isagoona markii lacaleema saro kadib uu bilaabi doono wadahadal toos ah oo uu labadaasi dhinac la galo si loo soo saaro Ra”iisulwasare .